PressReader - Ilanga: 2018-11-01 - Ubeke konke kuMdali uKelly
Ubeke konke kuMdali uKelly
Ilanga - 2018-11-01 - Izindaba - THANDI ZONDI tzondi@ ilanganews. co.za
INDLOVUKAZI emculweni we-afro pop, uKelly Khumalo, uthi isigaba akuso njengamanje empilweni yakhe sibaluleke kakhulu. Uthi yisikhathi lapho egxile kakhulu ezintweni ezakhayo, neziya phambili. “Ngijabule kakhulu, ngisesikhathini lapho ngibeke yonke into kuMdali ukuthi kube nguye ongiholayo. “Ngidedele konke ukuba kwenzeke ngendlela okumele kwenzeke ngayo,” kuchaza uKelly engxoxweni ekhethekile abenayo neLANGA. Utheleke emahhovisi aleli phephandaba ebonakala nje ukuthi ukhululekile empilweni, emuhle, edlubhe i- short ye- denim neshirt elimnyama elibonakala ngale, eziphihle ngamacat eye sunglasses nezicathulo ezinde kanti ekhanda ubeshaya nge- weave e- blonde. Indlela abezicuphe ngayo ubungaze udideke, uzitshele ukuthi ngesinye sezihlabani zaphesheya kwezilwandle ezidume umhlaba wonke.
Kuzokhumbuleka ukuthi usanda kukhipha ingoma yokholo, nokuyinto emangaze abaningi ngenxa yokuthi waziwa kakhulu engumuntu ocula ezothando. Uthi kahle-hle bekungesikho ukuthi ungena kwigospel ngoba kwasekuqaleni wangena kwinhlolokhono ngawo lo mculo.
Uzichaza njengomuntu okhulele enkonzweni futhi nokucula wakuqala khona. Uthi ushaye ingoma yokholo ngenxa yezicelo zabalandeli eziningi abezithola.
“Ngikholwa wukuthi bakhona abantu ababizelwe ukucula i- gospel. Le ngoma engayibhala kwakuyindlela yokubonga. Abantu bebefuna ukwazi ukuthi yini le engigcinile emuva kwezinto ezingaka ezingehlele empilweni nokukwazi ukuhlala iminyaka ewu-15 endimeni yezomculo,” eqhubeka nokuchaza.
Kukho konke lokhu ugcine esebhabhadiswa njengoba kuke kwavela izithombe zakhe enkundleni yokuxhumana i-Instagram.
“Ngibone sekuyisikhathi esifanele ukuba ngibhabhadiswe. Bekukhona izwi ebelilokhu libelesele ukuthi kumele ngibhabhadiswe,” kuqhuba yena.
Yize enze okuyingxenye ekhombisa ukuba ngumKristu kodwa uthi akakhohliwe yimvelaphi yakhe.
“Ngigxilile kwimvelaphi yami njengoba nokholo ngilwamukela ngezandla zombili. Kwesinye isikhathi sigcina sesigxila kakhulu ezintweni zasentshonalanga bese siyakhohlwa ngokwethu, sibize abantu bakithi ngamadimoni.
“Angikwazi ukuba ngigxile engxenyeni eyodwa ngoba ngingumuntu ozamukelayo ezomoya. Ngikubona kuyijoka lami ukuba ngifundise abantu abangazi ngalokhu,” kuchaza uKelly osekhiphe i-album entsha. Konke osekwenzekile empilweni yakhe uthi kumembulele elinye ikhasi empilweni.
“Selokhu ngidlule kulolu hambo nginomona ngami futhi ngiyakhetha ukuthi ngubani engimsondeza eduze kwami, ngifuna okumsulwa kuphela.”
Elandisa ILANGA ngokuba ngumama wabantwana ababili uthi ugcina esekhohliwe nokuthi ubakhulisa yedwa ngoba uthola ukwesekwa emndenini.
“Ukuba yi- single mother sekufana nento eyimpilo kimi, sengaze ngajwayela ukuthi ngingubaba nomama ezinganeni zami. Akukho ukuthi kumele ngibhalansise kodwa umzimba wami yiwo ongitshelayo uma kumele ngichithe isikhathi nabantwana bami.
“Bayazi ukuthi umama kumele asebenze futhi konke engikwenzayo ngikwenzela bona. Okubalulekile wukuba ngibanike uthando kuphela,” kuchaza uKelly.
UKelly waziwa njengomuntu ozikhulumelayo futhi oyisho into injengoba injalo, ngisho ezinkundleni zokuxhumana amagama akawasefi kodwa usho okusuka ngaphakathi.
Uthi akazi kungani osaziwayo beba nendlela ethile abaziphatha ngayo ngoba ngeke babe msulwa bebe bengabantu nabo abafana nabanye.
Uthi zonke izinto ezishiwo ngabantu uyaziphendula ngoba uyakholwa ukuthi kumele abhodle, akukhiphe okungaphakathi.
“Abakushoyo akukho mayelana nami kodwa kumayelana nomuntu osuke ekusho. Kunzima ukubona umuntu enza into owawukade wawufisa ukuyenza inhliziyo igcina ibuhlungu bese usho noma yini.
“Kukho konke okushiwoyo kimina ngibheka ukuthi kushiwo ngubani futhi lowo muntu uyini kimi.”
Le ntokazi yakwaKhumalo kayizange ithande ukuphumela obala ngobudlelwano anabo noChad Da Don osekusabalele amahlebezi okuthi bayathandana.
“Engingakusho nje wukuthi ngijabule kakhulu ukuba naye empilweni yami,” esho ephela wuhleko.
IZITHOMBE YI: INSTAGRAM NE-TWITTER
UKELLY uthi impilo yakhe imayelana nenjabulo nokuzisondeza eduze kwabantu abanezinhloso ezinhle empilweni.